မြန်မာ - တရုတ်နယ်စပ် ဝင်ပေါက်တွင် ကုန်တင်ကားများ ဝင်ထွက်မှု အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေမှုနှင့် ဘဏ်အကော? - Yangon Media Group
မြန်မာ – တရုတ်နယ်စပ် ဝင်ပေါက်တွင် ကုန်တင်ကားများ ဝင်ထွက်မှု အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေမှုနှင့် ဘဏ်အကော?
မူဆယ်၊ ဇွန် ၂၅
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)မူဆယ်မြို့ မြန်မာ- တရုတ်နယ်စပ် ဝင်ပေါက်များတွင် ကုန်တင်ကားကြီးများ ဝင်ထွက်မှု အခက်အခဲမျိုးစုံ တွေ့ကြုံနေရခြင်း၊ မြန်မာ-တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးတွင် ကုန်သွယ်မှုမညီမျှမှုများရှိနေခြင်းနှင့် တရုတ်ပြည်ရှိဘဏ်များတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ Bank Account အများကို တရုတ်အစိုးရ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ပိတ်ခြင်းနှင့်ဖွင့်ခြင်းများကြောင့် မြန်မာကုန်သည်များအနေဖြင့် ငွေထုတ်ယူရာနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲမျိုးစုံဖြင့် ကြုံတွေ့နေကြရကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ မြန်မာကုန်သည်များ အခက်အခဲမျိုးစုံဖြစ်ပေါ်နေသည့်အတွက် ဖြေရှင်းနိုင်ရန် မူဆယ်မြို့ရှိ ရှမ်းပြည်နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်း ကျော်သိန်းအပါအဝင် တာဝန်ရှိသူများနှင့် မြန်မာကုန်သည်များသည် ဇွန် ၂၄ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် မူဆယ်မြို့ ၁ဝ၅မိုင် ကုန်သွယ်ရေး ဇုန်အတွင်း ပဲ၊ ပြောင်း၊ နှမ်းကုန်စည်ဒိုင်၌ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခြင်း ပြု လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဇွန်လဆန်းပိုင်းက တရုတ်ဘဏ်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ ဘဏ်အကောင့်များ ယာယီပိတ်ခံထားရမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး တရုတ်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုအတွက် ငွေပေးချေရာတွင် တရုတ်ယွမ်ငွေဖြင့်သာ ပေးချေရ ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာကုန်သည်များ အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေရခြင်းဖြစ်သည်။
”တရုတ်အစိုးရက မြန်မာကုန်သည်တွေရဲ့ ဘဏ်အကောင့်တွေ ပိတ်ချင်တဲ့အတိုင်း ပိတ်နေတယ်။ တရုတ်အစိုးရကပြောတာက လောင်းကစားမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါး မှုတို့နဲ့ ငွေကြေးခဝါချမှုတို့နဲ့ သက်ဆိုင်နေလို့ ပိတ်တယ်ပဲ မကြာခဏအကြောင်းပြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရောင်းဝယ်မှု မြန်ဆန်ချောမွေ့စေဖို့ တရုတ်ငွေ လက်ဝယ်ရှိသူတွေကတစ်ဆင့် ငွေပေးချေတယ်။ ဒီမှာနှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ရောင်းဝယ်မှုပုံစံမှာ တရုတ်ငွေနဲ့ ပေးချေရတဲ့အတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေရတာဟာ တရုတ်ငွေကို နိုင်ငံတကာငွေကြေးအဖြစ် မသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် ကြောင့်လည်းပါပါတယ်”ဟု ပဲ၊ ပြောင်း၊ နှမ်းကုန်စည်ဒိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမောင်က ပြောကြားသည်။
ယခင်ကာလတူအချိန်များက တစ်ရက်လျှင် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကားအစီးရေပျမ်းမျှ ၁ဝဝဝခန့်ရှိခဲ့ရာမှ ဇွန် ၂၃ ရက် စာရင်းအရ မြန်မာဘက်မှ ပို့ကုန်ယာဉ် ၅ဝ၆ စီးနှင့်သွင်းကုန်ယာဉ် ၃၂၄ စီးမျှသာရှိခဲ့ပြီး မြန်မာဘက်မှ အများဆုံးတင်ပို့နေသည့်ကုန်များမှာ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့၊ ဆန်၊ သကြား၊ ပဲ၊ ပြောင်း၊ နှမ်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်နှင့် ရာသီအသီးအနှံ ဖြစ်သည့် သရက်သီး၊ နာနတ်သီးများ ဖြစ်သည်။ ”တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ဒေသ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ကိုင်နေတဲ့ မြန်မာကုန်သည်တွေရဲ့ ဘဏ်အကောင့် တွေ ပိတ်ခံရမှုကို ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော်မှာ တင်ပြဆွေးနွေးပေးပါမယ်။ ကုန်သည်တွေ ဘက်ကလည်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခက်အခဲ တွေကို စာနဲ့ရေးပြီး တာဝန်ရှိသူ တွေဆီကို အမြန်ဆုံးတင်ပြဖို့ လိုအပ်တယ်”ဟု ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းကျော်သိန်းက ပြောကြားသည်။
ယခုလ ဇွန်လဆန်းပိုင်းက တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ ဘဏ်အကောင့်များ ယာယီပိတ်ထားမှုကြောင့် နယ်စပ် ဒေသကုန်သွယ်မှုအချို့မှာ ရပ်နားထားရပြီး မန္တလေး-မူဆယ် ပြည် ထောင်စုလမ်းပိုင်းတွင် ကုန်သွယ်ယာဉ်များ အဝင်အထွက်နည်းပါးသွားကြောင်းသိရသည်။